Cooke Optics S7 / i, lens an'ny Frame Plus feno dia manampy amin'ny famoronana fanjakana majika amin'ny Lahatra Netflix: The Winx Saga | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Cooke Optics S7 / i, solomaso Full Frame Plus dia manampy amin'ny famoronana fanjakana mazika amin'ny Lahatra Netflix: The Winx Saga
Cooke Optics S7 / i, solomaso Full Frame Plus dia manampy amin'ny famoronana fanjakana mazika amin'ny Lahatra Netflix: The Winx Saga
DP Frida Wendel FSF, nifidy Cooke S7 / i Torohevitra feno Frame Plus to shoot Lahatra: The Winx Saga, ny fampifanarahana mivantana amin'ny fahitalavitra mivantana an'ny andian-tsarimihetsika Winx Club an'ny Nickelodeon. Taorian'ny fanombohany ny Netflix tamin'ny volana Janoary, nitifitra haingana ny laharana voalohany tany Etazonia ary ny laharana fahatelo tany UK ny fandaharana
Ity andiany ity dia manaraka ny angano antsoina hoe Bloom (Abigail Cowen) izay nifindra tany amin'ny sekolin'ny Fairy Alfea izay mila mianatra mifehy ny herin'ny maizina mampidi-doza. Any am-pianarana dia mihaona amin'i Stella izy, angano maivana (Hannah van der Westhuysen), Aisy fairy rano (Precious Mustapha), Terra, angano eto an-tany, (Eliot Salt), ary Musa, angano saina, (Elisa Applebaum). Miaraka amin'ny fanampian'ny namany efatra vaovao, Bloom dia manomboka mianatra bebe kokoa momba ny lasa. Ny tontolon'ny majika dia mitondra ny mpihaino hamaky karazana karazany, manomboka amin'ny horohoro ka hatramin'ny tantaram-pitiavana amin'ny fotoana sy vazivazy mampientam-po.
Ny fanaovana sary dia natao tao amin'ny County Wicklow, any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Irlandy, miaraka amin'ireo toerana any amin'ny ala ala sy morontsiraka be vato eo amin'ny Ranomasina Irlanda, izay mamorona tontolo ara-tantara sy voajanahary mety hamboarina ho an'izao rehetra izao majika.
Ho an'ny tetikasa, mpanao sary an-tsarimihetsika Frida Wendel FSF dia nampiasa ARRI ALEXA Mini LF, izay vaovao tamin'ny fotoana nananganana horonantsary; ARRI dia nanolotra azy ho fakan-tsary mialoha ny famokarana talohan'ny famoahana azy tamin'ny taona 2019. Ho an'ny solomaso dia nisafidy ny andiany Cooke S7 / i Full Frame Plus izy, nampiasa ny halavany 18, 25, 32, 40, 50, 75, 100 ary 135mm . Ity no fotoana voalohany nampiasàny ny lantom-peo feno, izay natolotry ny orinasa mpanofa Vastvalley.
"Misy mpandray anjara lehibe dimy, samy misolo tena ny singa samihafa, noho izany ny resaka tena zava-dehibe izay nataonay nandritra ny famokarana dia ny fomba tokony hisolo tena ny angano tsirairay sy ny fomba filalaovana amin'ny VFX," hoy i Wendel. “Tianay ho madio sy madio i Fate. Tamin'izay no niditra ny fakantsary sy ny masoko Cooke. Manana VFX be dia be izahay ary jiro mifanerasera be dia be ka nipoitra avy hatrany ireo lantira ireo, satria heveriko fa ny masoko Cooke no manana ny flares tsara indrindra sy misoko mangina. Tiako ny halalin'ny saha alainanao amin'ny endriny feno ary hitako fa tena nahafaly tokoa ny manana fampahalalana be dia be hilalaovana amin'ny kilasy. Tena mahavariana. ”
“Andro fitsapana iray monja no nandaniantsika tao amin'ny studio ary avy eo dia nanidina nankany London aho mba hihaona amin'ny mpandoko loko Peter Doyle ao amin'ny De Lane Lea any Soho. Avy eo vao afaka andro iray hafa izahay tao amin'ny kilasy mamorona LUT izay tianay. Tiako be ny masoko Cooke S7 / i hany ka niditra fiaramanidina niverina tany Dublin aho mba haka ny kitany avy hatrany, ”hoy i Wendel nanampy.
Ny vanim-potoana voalohany amin'ny fizarana enina an'ny Lahatra: The Winx Saga azo jerena ao amin'ny Netflix izao.
Archive Cooke manan-tantara ny antontan-taratasy sy sary tany am-boalohany natolotra ho an'ny AMPAS - Aprily 19, 2021
Cooke Optics dia mandray an'i Iain Neil ho lohan'ny mpanolotsaina optika - Aprily 19, 2021
Cooke ny hazavana Feno Frame Plus Netflix S7 / i VFX 2021-04-01
Previous: Mampiharihary tsara ny 'Emotions', Perfume Vaovao hanampiana ireo tonian-dahatsoratra sy mixers maimbo tahaka ny feony
Next: Ny horonantsary "Neo-Bedouin" an'ny HPA dia mampiasa URSA Mini Pro 12K